Posted by Tranquillus | May 24, 2018 | Kobcin xirfadeed
Waa run maanta, dhammaan shaqaalaha waa in ay si joogta ah u tababaraan si ay ugu sii jiraan tartanka.
Laakinse jadwalka mudan ee wasaarada ah ee lagaa rabo inaad ku shaqeysid shaqo iyo nolol qoys, way ku adagtahay inaad hesho wakhti aad tababarto.
Halkan waxaa ku qoran dhowr talooyin haddii aad rabto in aad tababbarto, laakiin ma haysatid wakhti badan oo aad ku qadarin kartid.
Sababta sababta tababarku muhiim u yahay?
Si fudud sababtoo ah adduunka shaqada ayaa si wayn u baddashay sanadihii la soo dhaafay oo sii waday isbeddelka.
Maalmahan, qalinjabiyeyaal dhallinyar ah ma shaqeyn doono mid, laakiin xirfado badan oo noloshiisa ah.
La tababarka waa xubin muhiim ah markaad rabto inaad shaqo bedesho, adigu iskaa wax u qabso ama aad rabto inaad shaqo hesho.
Intaa waxaa dheer, tiknoolajiyadu waa ay sii soconayaan, tanina waxay ku jirtaa qaybo badan oo waxqabadyo ah oo ay ku khasbaan shaqaalaha inay sii wadaan heerkooda aqoontooda marwalba.
Tababar shaqaale, waajibaad iyo xuquuq:
Waa in la ogaadaa in loo-shaqeeyaha uu waajib ka saaranyahay inuu tababarto shaqaalihiisa si ay isbedel ugu sameeyaan booskooda.
Tani waxay hagaajineysaa xirfadaha iyo aqoonta, waxay sahlaysaa wadahadalka bulshada, laakiin sidoo kale shirkadda ayaa ka dhigaysa mid tartan ah oo haya shaqaaleynta shaqaalaha.
Waajibkani wuxuu khuseeyaa dhammaan shaqaalaha oo haddii aan la ixtiraami karin taasi waxay keeni kartaa ciqaab aad u kala duwan oo aan ka iman karin awood la'aanta in la eryo mushaharka shaqaalaha loo eryey la'aanta.
Shaqaaluhu waxay haystaan ​​tiro gaar ah oo aalado ah oo u oggolaanaya inay galaan heerka sare ee aqoonta, si ay u hagaajiyaan xirfadahooda ama dib u qabsadaan.
Haddii ay maalgeliso cidda aad u shaqayso ama hay'ad gaar ah, tababar xirfadeed waa mid sax ah kaas oo wax looga qabanayo dhammaan shaqaalaha inta lagu jiro xirfaddooda.
READ Dib u dhiska: cawaaqibta iyo talooyin si loo joojiyo wax walba dib u dhigis
Tababarka wadahadalka, hab wanaagsan oo lagu tababaro marka aad shaqeyneyso:
Tababarka fog e-waxbarashada waa hab la xaqiijiyay.
Hadda waxaa suurtagal ah in lagu tababaro xirfado badan adoo qaadanaya koorsooyin waraaqo.
Tani waa xalka oo bixiya dabacsanaan aan ka duwaneyn xarunta tababarka halkaasoo aad kuxirtid jadwalka fasalka.
Fiidkii, maalmaha fasaxa ah ama inta u dhaxaysa laba ballamo, waxaad tababareysaa markaad haysato waqti xor ah.
Tababarka joogtada ah ee shaqaalaha:
Jaamacado badan iyo jaamacado badan sida dugsiyada ganacsiga waxay bixiyaan barnaamijyo gaar ah oo loogu talagalay shaqaalaha.
Waxay kobciyaan barnaamijyada gaaban oo ay abuuraan koorsooyin wax lagu dhejiyo shirkadaha.
Tani waxay u oggolaanaysaa shaqaalaha inay tababaraan xirfadaha inta ay shaqeynayaan.
Sidee loo tababaraa marka aanad waqti lahayn? Agoosto 19th, 2018Tranquillus
horeSidee loo maamulaa xidhiidhka uu la leeyahay maamulkiisa?
socdaSidee ayey u fiican tahay dhammaan xaaladaha?